सीके राउतलाइ संसदमा छिराउन सांसद सूर्यनारायणलाई राजीनामा दिन लगाइएको त होइन ?::Nepali Online News Portal
सीके राउतलाइ संसदमा छिराउन सांसद सूर्यनारायणलाई राजीनामा दिन लगाइएको त होइन ?
सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष)बाट चुनाव जितेका समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम)का सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा आउनुलाई विभिन्न अड्कलबाजी काटिएको छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा उनको राजीनामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई संसदमा प्रवेश गराउन आएको चर्चा चलेको छ । सांसद यादव आवद्ध समाजवादी पार्टी वर्तमान सरकारमा छ । सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन् ।
सोही अलिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न सांसद यादवलाई राजीनामा दिन लगाइएको चर्चाले राजनीतिक बजार तताइरहेको बेला यादवले सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामापत्र बुझाएका हुन् ।
तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म उनको राजीनामा स्वीकृति भइसकेको छैन । तर उनको राजीनामा स्वीकृत हुनेमा धेरैले विश्वास गरेका छन् । आन्तरिक र भद्र सहमतिपछि उनको राजीनामा आएको नेताहरुको बुझाइ छ ।
गएको फागुन अन्तिम साता पृथकतावादी आन्दोलनमा उत्रिएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सीके राउतसँग सरकारले आश्चर्यजनक रुपमा ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेको थियो । जेलबाट छुटेको भोलिपल्टै राष्ट्रियसभा गृहमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेर सरकारले राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको सार्वजनिक गरेको थियो ।